Waqooyiga Kuuriya oo ugu hanjabtay Mareykanka inay ku qaadeyso duqeyn Nukliyeer – idalenews.com
Waqooyiga Kuuriya oo ugu hanjabtay Mareykanka inay ku qaadeyso duqeyn Nukliyeer
Waqooyiga Kuuriya ayaa fasixii ugu dambeeyay siisay Ciidamadeeda inay qadaaan weerar dhinaca cirka oo Nukliyeer ah, kaasoo ka dhan ah Mareykanka, iyadoo ay jirto cabsi ah dagaalo ka dhex qarxa labada kuuriya oo xiisad xun u dhaxeysa.
Duqeynta milateri ee Kuuriya ku baaqday ee dhinaca Nukliyeerka ay ku qaadeyso Mareykanka ayaa loo arkaa mid sii xoojineysa xiisada labada dal u dhaxeeya, waxaana Mareykanka uu dhowaan ku soo rogay cunaqabateyn hor leh
Dowladda Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay tallaabadan kaga jawaabeyso, kibirka iyo awood sheegashada Mareykanka uu la soo baxay, kadib markii dhowaan uu dhoolatus dhinaca milateriga uu la sameeyay dalka colaada kala dhaxeyso ee Koofur Kuuriya.
Xukuumada Piyongyang ayaa heegan buuxa gelisay ciidamada, si ay u qaadaan weerar, waxaana jira digniino laga bixinayo hadii Waqooyiga Kuuriya adeegsato hubkeeda Nukliyeerka.
Xarunta gaashaandhiga ee Mareykanka Pentagon ayaa ku dhawaaqday in ay u direyso gantaalalo casri ah oo difaac jasiiradda Pacific ee Guam taasi oo ah ka hortag.
Kenya oo guuto ka mid ah ciidamadeeda kala baxeysa Koofurta Soomaaliya